Eline Bregera : nahazo fiara avy amin’ny Telma | NewsMada
Tratran’ny vela-pandriky ny polisy…: Sarona ilay mpandefa hafatra mifono fisolokiana amin’ny ...décembre 1, 2020
Commission d’enquête parlementaire: Le Sénat tire des plans sur la comète ...décembre 1, 2020
Fiparitahana fitaovam-piadiana: basy mahery vaika miisa 2 129 nopotehina imasom-bahoaka
Blanchiment de capitaux: un ancien DG de l’Apipa devant le Pac
Fanafihan-jiolahy mitam-piadiana: volabe antapitrisa Ar voaroba, iray maty voatifitra, iray hafa naratra
Grand Sud: 90% des communes, touchées par la famine
Tratran’ny vela-pandriky ny polisy: sarona ilay mpandefa hafatra mifono fisolokiana amin’ny SMS
Commission d’enquête parlementaire : le Sénat tire des plans sur la comète
Eline Bregera : nahazo fiara avy amin’ny Telma
Par Taratra sur 23/06/2017
Fety miaraka amin’ny Telma. Nanolotra loka ny Telma ho an’ny mpanjifa iray, Eline Bregera, avy any Morondava, omaly, nahazo fiara vaovao nomen’ny tale jeneraly, Patrick Pisal-Hamida, tao amin’ny Galerie Zoom Ankorondrano. Eline Bregera no mpanjifa tsara vintana, azy ny karatra Sim voaray tamin’ny fisarihana natao amin’ireo mpanofa. Fiara BAIC A 115, mitentina 40 tapitrisa Ar, ny azon’io mpanjifa io noho ny fahatokisany ny Telma. Mpanjifa dimy hafa, notolorana loka samy hafa ihany koa.
Nanomboka ny volana marsa 2013 ny nampiasan’i Elena Bregera izany karatra Sim izany sy nanokafany Mvola amin’io karatra io ihany. “ Nahatonga ahy nanamarina ny maha mpanjifa ahy ny fanentanana ataon’ny Telma, , izay voamarina ara-dalàna. Koa misaotra ny Telma aho noho ny fankatoavany ny mpanjifa ao aminy”, hoy i Eline Bregera.
Tao anatin’ny fotoana fanentanana, nanolorana finday 100 mahery ho an’ny mpanjifa mpanofa ny tambajotra Telma any amin’ny faritra maro, toy ny any Toliara, Fianarantsoa, Ambatondrazaka, Mananjary, Antsohihy, Moramanga, Antananarivo… Manentana ny rehetra ny Telma, hanoratra ny anarany amin’ny karatra Sim izay ampiasainy, na aiza na aiza ny toerana misy azy, araka ny takin’ny lalàna.
Emission Amabarao – Tompon’andraikitra Serasera eo anivon’ny FMFP #Audio 03/12/2020
Emission Spéciale: l’invitée de Priscat RAKOTOMALALA – M. JACQUOT #Vidéo 03/12/2020
Kitra – “MLS D1” Etazonia: hiatrika ny manasa-dalana ry Romain Metanire 03/12/2020
“Business forum” Toliara: namantarana ny olan’ny mpandraharaha 03/12/2020
Fametrahana ny vidin’entana: harahi-maso ny mpivarotra 03/12/2020
FAKAFAKA: Ny teny, teny ho eny, zary tenindreny !